Iiholide zaselwandle njengokuba beziqhele ukubakho - I-Airbnb
Iiholide zaselwandle njengokuba beziqhele ukubakho
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJonnie
Ngaba unqwenela ukuba ube nolwandle okanye iholide yokuloba efana neentsuku zakudala? Nantsi indawo efanelekileyo. Umgama wokuya elunxwemeni nakwiivenkile, oku kulula, kodwa kuxhotyiswe ngokupheleleyo kwaye kuvuleke, indlu yaselwandle idibanisa isitayile esidala kunye nendawo etofotofo yale mihla
Le ndlu inkulu yakudala inendawo eyaneleyo yeentsapho ezimbini okanye iqela labahlobo elinamagumbi ayi-4 okulala kunye nebhedi engasetyenziswayo. Iphefumlelwe ngomoya ngekhitshi elinento yonke nefenitshala yale mihla. Kukho indawo eninzi yokupaka imoto esesitratweni kuquka indawo yesikhephe kwindawo engaphantsi komhlaba (12m x 4m x 2.75M ukuphakama). Luhambo nje olufutshane oluya elunxwemeni, kwiivenkile, kwiibhari nakwiipaki ze-eslanade kunye nemizila yomjikelezo, kwaye ikhilomitha eyi-1 kuphela ukuya kwindawo enyukayo yesikhephe kwi-Wild Cattle Creek.
4.66 · Izimvo eziyi-133
Le ndlu ikwindawo eyaziwa ngokuba 'yi-Old Tannum', njengoko ikwinduli engasentla kolwandle kwaye yayiyindawo yokuqala eyakhiwe (kuba yeyona ndawo ifanelekileyo)! Iminyaka elishumi edlulileyo iye yabona ukuqaliswa kwezinto zale mihla ukuze ukwazi ukufumana iindawo zokubethwa ngumoya ecaleni kweeflethi okanye izindlu ezikwicomplex namakhaya amatsha. Kutshanje yenziwe kwikona engaselunxwemeni lwePacific Avenue xa uhamba ngeenyawo kangangeemitha eziyi-200 ukusuka kule ndlu, yindawo encinci yokuthenga equka ibhari nevenkile yokutyela, ibhari ye-smoothie, izinto zasendlini nefashoni, iplagi yezemidlalo kunye nevenkile yeentlanzi neetapile. I-200m kwelinye icala yindawo yokuthenga iColes, ikhemikali, ibhari kunye neevenkile zokutya kuquka iKFC, kunye neekhefi.
Nangona kunjalo, i-Tannum ayikalahlekelwa yindalo yedolophana epholileyo. Sicebisa ngokukhethekileyo ukuba uhambe ngeenyawo kusasa ukuya kwindawo entsha ukuze uthathe iphepha uze ufowunele kwivenkile yezinto ezibhakiweyo okanye umxheli ukuba ngamnye unencasa yakhe ekhethekileyo yeTannum.
Unxweme olulungele usapho lujongwa ngeenyanga ezifudumeleyo nangeeholide zesikolo. Umlomo weWild Cattle Creek uyathandwa ngabantu abahamba ngeekite kwaye banokubonwa bekhwela amaza elunxwemeni ngeempelaveki ezininzi. Abantu abathanda ukutyibiliza emanzini) banokuhamba-hamba ukuze babuke iWild Cattle Island National Park - qiniseka nje ukuba unqumla umva ngaphambi kokuba igcwale!
NgoMgqibelo wokuqala ngokuhlwa kwenyanga nganye (ngoMatshi-Dec) kukho iivenkile zemarike ezingaphezu kwe-90 kunye nomculo odlalwayo elunxwemeni. Ifumaneka nakwi-eslanade parklands engaphezu kweekhilomitha eziyi-20 zomjikelo okanye uhamba ngeenyawo kwi-Wild Cattle Creek, i-Tannum Beach kunye noMlambo i-Boyne.
Kwabo bathanda ukuloba, kukho indawo yokuhamba ngesikhephe ekwikhilomitha eyi-1 ukusuka eWild Cattle Creek kwaye inendawo eninzi yokupaka isikhephe sakho phantsi kwendlu. Ukuhamba ngephenyane kuMlambo iBoyne kuyathandwa.
Thatha uhambo losuku oluya eLake Awoonga uze uyeke eBenarylvania ukuze wonwabele ubisi kwivenkile ethengisa ukutya kwakudala uze uye kwindawo enesikhumbuzo saseBenarction uze uye kwindawo yesikhumbuzo.
Ekupheleni kosuku oluxakekileyo, yonwabela umoya opholileyo kwindlu yakho enamagumbi aliqela okanye uhlale phandle uze ubambe ulwandle ngoxa upheka ukutya kwi-barbie.
Umbuki zindwendwe ngu- Jonnie
Likhona ithuba lokuba ungasiboni kwaphela, njengoko kungenwa ngesitshixo esinePIN. Ukuba ukuhlala kwakho kude kuneveki, umcoci uTracey uza kutyelela ukuze indlu icoceke aze atshintshe amashiti neetawuli zakho. Ngaphandle koko zive usekhaya.
Likhona ithuba lokuba ungasiboni kwaphela, njengoko kungenwa ngesitshixo esinePIN. Ukuba ukuhlala kwakho kude kuneveki, umcoci uTracey uza kutyelela ukuze indlu icoceke aze atshin…